SOMALITALK - FARSOOLEEY
Tuulada Farsooleey oo Loogu Dhamaadey Shuban Biyood:
Muqdisho DMC Khamiis 3.May.2007.
Tuulada Farsooley oo ka tirsan Degmada Qoryooleey ee Gobolkla shabeellada Hoose ayaa waxaa ka jira shuban Biyood aad u daran oo ay ku dhammaadeen dad gaaraya 50 Qofood,waxaana hadda u ildaran dad gaaraya 60 qof,Sida uu na soo gaarsiiyey mid kamid ah odeyaasha Beesha Farsooleey oo magaciisa la yirahdo Aadan Isaaq Aadan.
Dadka shubanka u dhintey ayaa u badan Caruur iyo dad da� ah iyo dadka kale ee caadiga ah,wax gargaar ah oo la soo gaarsiiyey ma jirto maraka laga reebo 30 faleebo oo ay u soo dhireen dhaqaatiirta Cusbitalka Degmada Qoryooleey kuwaas oo oo lagu badabaadiyey 5 qofood.
Aadan Isaaq Aadan oo ka tirsan odayaasha iyo gudiga maamulka farsooleey Qaaylo dhaan u yimid Muqdisho
Aadan Isaaq ayaa faahfaahin ka bixiyey tuulooyinka sida ba�an loogu dhamaadey,dadka dhintey ayaa inta badani waxay ku dhinteen Tuulada Dhaqane oo ay u geeriyoodeen shubanka 26 qof,halka inta kalena ay ku dhinteen Tuulooyinka,Gaadlleey,Buulo Xasan Kurdaaleey,Buulo Arboow iyo Taawfiiq oo dhamaantood hoos taga Farsooleey.
Hadddaba waxay odeyaasha deegaanka Farsooleey oo uu hormuud u yahay Guddoomiyaha Xaaji Madgaab Maxamed Caliyoow,Hay�adaha Caalamka iyo kuwa maxalliga ah ka codsanayaan in lala soo gaaro Daawo si loo badabadiyo shacabka halkaas ku dhamaanaya.
Waxayna Codsi gaar ah u gudbinayaan Hay�adaha UNICEF,WHO,UNDB,ICRC iyo INGO yada ka howlgalaya Gobolka shabeellada Hoose.Shuban Biyoodka ayaa wuxuu horey dad badan ku laayey deegaanno ka tirsan Koonfurta Soomaaliya,iyadoo hay�adaha gargaarkuna ka qabanin wax ku filan.
Deegaankan ayaa waxaa saaran Cunaqabateyn ay u dhigeen qaar ka tirsan masuuliyiinta Gobolka iyo madaxda Qaarkood ee Hay�adaha gargaarka ee ku sugan Soomaaliya,sidaay ku doodayaan odeyaasha deegaanku.
Shabakdda Warbaahinta DMC Muqdisho